Fiara – Midi Madagasikara
Magro : Fiara maromaro nosavaina
Redaction Midi Madagasikara 18 janvier 2014 Fiara, Magro, nosavaina
Tonga teo amin’ny Magro ny fiaran’ny Emmo-Sécurité omaly ary nanao fisavana ireo fiara izay nolazain’ireo fa mampiahiahy. Raha araka ny fanazavana azo dia nisy vaovao azon’izy ireo momba ny fisian’ny fiara iray izay nitondra fitaovam-piadiana. Tsy nahitam-bokany izany ary tetsy andanin’izay dia toa niteraka fahasorenana ho an’ireo olon’ny Magro ny zavanitranga. Nisy olona iray voasambotra…
Behoririka : Lehilahy maty voadonan’ny fiara, vaky ny lohany, tapaka ny tànany
Redaction Midi Madagasikara 10 janvier 2014 Behoririka, Fiara, Lehilahy maty, voadona
Na dia mitandrina mafy aza ny mpamily, tery loatra ny làlana ary maro ny olona ka dia tsy azo nosorohana ny loza Nisehoana lozam-pifamoivoizana, omaly teny Behoririka amin’ny làlana avy any Soarano iny. Lehilahy iray tokony ho eo amin’ny 28 taona no fantatra fa maty voadonan’ny fiara. Ny loharanom-baovao no nahalalàna fa toa tsy hitan’ilay…
Ambohimanarina : Fiara nifandona, nirehitra
Redaction Midi Madagasikara 2 janvier 2014 Ambohimanarina, Fiara, nirehitra
Ny voalohan’ny volana janoary,tokony ho tamin’ny 3 ora maraina no nitrangana lozam-pifamoivoizana tetsy Ambohimanarina. Fiara Renault 4, nizotra ho aty An-drenivohitra no nifandona tamina fiara Renault 11 izay ho any Ambohidratrimo. Vokatry ny fifandonana mafy dia nirehitra tanteraka ilay fiara R.11, fa ilay 4L kosa ny tapaky ny lohany ihany no may. Olona mipetraka ao…